Bayern Munich, Chelsea, Juventus oo guulo gaaray & guud ahaan natiijooyinka kulammadii caawa lagu daah furay Champions League… SAWIRRO – Gool FM
Dajiye September 14, 2021
(Barcelona) 14 Sebt 2021. Bayern Munich ayaa guul ka soo heshay kooxda Barcelona oo ay ku booqatay garoonka Camp Nou, kaddib markii ay kaga oo adkaatay 0-3, ciyaartooda koowaad guruubka E ee tartanka Champions League.
Daqiiqadii 34-aad Bayern Munich ayaa hoggaanka u qabatay dheesha kaddib markii uu 0-1 ka dhigay Thomas Mueller, waxaana caawinta goolkan lahaa Leroy Sane.
56 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Bayern Munich ayaa dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta waxaan 0-2 ka dhigay weeraryahankooda Robert Lewandowski.
Daqiiqadii 85-aad Robert Lewandowski ayaa hoggaanka u sii dheereeyay kooxdiisa Bayern Munich wuxuuna dheesha ka dhigay 0-3.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 0-3 ay kaga soo adkaatay Bayern Munich, kooxda Barcelona oo ay ku booqatay garoonka Camp Nou, ciyaartooda koowaad guruubka E ee tartanka Champions League.
Dhianca kale kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ka gaartay guul dirqi ah kooxda Zenit St. Petersburg, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, waxaana goolka qura ay ku adkaatay u dhaliyay weeraryahankooda Romelu Lukaku oo caawin ka helay saaxiibkiis Cesar Azpilicueta.
Hadaba halkaan hoose ka eeg guud ahaan kulammada caawa lagu daah furay marxaladda Guruubyada tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League,:-
Young Boys oo garoonkeeda Stade de Suisse Wankdorf guul kaga gaartay 10 xiddig kooxda Man United ah… +SAWIRRO